..(၂)ခါ(၃)ခါလုပ်​ကြည့်​ရုံနဲ့ ဆံပင်​ကျွတ်​တာ,နှစ်​ခွဖြစ်​တာ,ထိပ်​​ပြောင်​တာ,ဆံပင်​ဖြူ​နေရာကပြန်​မည်း(မဲ) ဆံပင်​ထူထူသိပ်​သိပ်​ပြန်​ဖြစ်​လာတယ် – Askstyle
..(၂)ခါ(၃)ခါလုပ်​ကြည့်​ရုံနဲ့ ဆံပင်​ကျွတ်​တာ,နှစ်​ခွဖြစ်​တာ,ထိပ်​​ပြောင်​တာ,ဆံပင်​ဖြူ​နေရာကပြန်​မည်း(မဲ) ဆံပင်​ထူထူသိပ်​သိပ်​ပြန်​ဖြစ်​လာတယ်
​fbက​နေပ ​ဆေးနည်းတစ်​ခုစမ်းလုပ်​ကြည့်​တာ (၂,၃) ကြိမ်​လိမ်းကြည့်​တာနဲ့သိသာလာတယ်​။
အုန်းဆီစစ်​စစ်​(၁၀)သားကိုမီးဖို​ပေါ်တင်​အပူ​ပေးပြီး စော​စောကတုးံထားတဲ့ရှား​စောင်းလက်​ပတ်​တုးံ​တွေထည့်​ပြီး​ မွှေ(​ကြော်​) ရှား​စောင်းလက်​ပတ်​ ခပ်​ဝါဝါအ​ရောင်​သို့​ပြောင်းလာပြီဆိုရင်​ ဇကာနဲ့စစ်​ ဆီပဲယူထားပါ။
ကြက်​သွန်​ဥနီအ​နေ​တော်​(၂)လုးံကို​ထောင်း(သို့) Belender နဲ့ကြိတ်​ပြီး​ရေစစ်​အ​သေး(သို့)ပိတ်​ဖြူစနဲ့အရည်​ညှစ်​ချကာခုနကအ​အေးခံထားတဲ့ဆီထဲ ကြက်​သွန်​ဥနီအရည်​​လောင်းထည့်​ပါ။
​ရေမချိုးခင်​ ဦး​ရေပြားကိုနှိပ်​နှယ်​ရင်းခပ်​ရွှဲရွှဲလိမ်း​ပေးပါ။ မိနစ်​(၂၀)​လောက်​ခဏထားပြီး​ခေါင်း​လျှော်​ချလိုက်​ပါ။
(၂)ခါ(၃)ခါလုပ်​ကြည့်​ရုံနဲ့ ဆံပင်​ထူထူသိပ်​သိပ်​ပြန်​ဖြစ်​လာပြီး ဆံပင်​ကျွတ်​တာ, နှစ်​ခွဖြစ်​တာ, ထိပ်​​ပြောင်​တာ, ဆံပင်​ဖြူ​နေရာကပြန်​မည်း(မဲ)လာတာ​တွေ သိသာလာပါတယ်​။ စမ်းပြီးလုပ်​ကြည့်​ပါ​နော်​…
အရမ်း​ကောင်းတာSabai Phyu ကိုယ်​​တွေ့လက်​​တွေ့မလို့ ချစ်​မိတ်​​ဆွေများကို ပြန်​လည်​မျှ​ဝေ​ပေးလိုက်​တာပါ…။
ဆီနဲ့ကြက်​သွန်ဥနီဆတူမ​ရောလိုက်​နဲ့… အရည်​များသွားရင်​အနံ့စွဲပြီး​ ရေသပ်​သပ်​ဆီသပ်​သပ်​ဖြစ်​သွားတာ​ကြောင့်​ အ​ကောင်းဆုးံ​စမ်းသပ်​​ရောစပ်​ပြီးမှ သတိ​ပေးရတာပါရှင်​….
ဆံပင်ရှည်နေပီလားသိချင်လို့ပါလို့ခဏခဏမေးနေကြသောချစ်ဖရန့်လ်တို့ရေ ပုံနှင့်တစ်ကွဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ် အရမ်းကောင်းပြီးကိုယ်တွေ့မို့မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်….
​fbက​နပေ ​ဆေးနညျးတဈ​ခုစမျးလုပျ​ကွညျ့​တာ (၂,၃) ကွိမျ​လိမျးကွညျ့​တာနဲ့သိသာလာတယျ​။
အုနျးဆီစဈ​စဈ​(၁၀)သားကိုမီးဖို​ပျေါတငျ​အပူ​ပေးပွီး စော​စောကတုးံထားတဲ့ရှား​စောငျးလကျ​ပတျ​တုးံ​တှထေညျ့​ပွီး​ မှေ(​ကွျော​) ရှား​စောငျးလကျ​ပတျ​ ခပျ​ဝါဝါအ​ရောငျ​သို့​ပွောငျးလာပွီဆိုရငျ​ ဇကာနဲ့စဈ​ ဆီပဲယူထားပါ။
ကွကျ​သှနျ​ဥနီအ​နေ​တျော​(၂)လုးံကို​ထောငျး(သို့) Belender နဲ့ကွိတျ​ပွီး​ရစေဈ​အ​သေး(သို့)ပိတျ​ဖွူစနဲ့အရညျ​ညှဈ​ခကြာခုနကအ​အေးခံထားတဲ့ဆီထဲ ကွကျ​သှနျ​ဥနီအရညျ​​လောငျးထညျ့​ပါ။
​ရမေခြိုးခငျ​ ဦး​ရပွေားကိုနှိပျ​နှယျ​ရငျးခပျ​ရှဲရှဲလိမျး​ပေးပါ။ မိနဈ​(၂၀)​လောကျ​ခဏထားပွီး​ခေါငျး​လြှျော​ခလြိုကျ​ပါ။
(၂)ခါ(၃)ခါလုပျ​ကွညျ့​ရုံနဲ့ ဆံပငျ​ထူထူသိပျ​သိပျ​ပွနျ​ဖွဈ​လာပွီး ဆံပငျ​ကြှတျ​တာ, နှဈ​ခှဖွဈ​တာ, ထိပျ​​ပွောငျ​တာ, ဆံပငျ​ဖွူ​နရောကပွနျ​မညျး(မဲ)လာတာ​တှေ သိသာလာပါတယျ​။ စမျးပွီးလုပျ​ကွညျ့​ပါ​နျော​…
အရမျး​ကောငျးတာSabai Phyu ကိုယျ​​တှလေ့ကျ​​တှမေ့လို့ ခဈြ​မိတျ​​ဆှမြေားကို ပွနျ​လညျ​မြှ​ဝေ​ပေးလိုကျ​တာပါ…။
ဆီနဲ့ကွကျ​သှနျဥနီဆတူမ​ရောလိုကျ​နဲ့… အရညျ​မြားသှားရငျ​အနံ့စှဲပွီး​ ရသေပျ​သပျ​ဆီသပျ​သပျ​ဖွဈ​သှားတာ​ကွောငျ့​ အ​ကောငျးဆုးံ​စမျးသပျ​​ရောစပျ​ပွီးမှ သတိ​ပေးရတာပါရှငျ​….
ဆံပငျရှညျနပေီလားသိခငျြလို့ပါလို့ခဏခဏမေးနကွေသောခဈြဖရနျ့လျတို့ရေ ပုံနှငျ့တဈကှဖွကွေားပေးလိုကျပါတယျ အရမျးကောငျးပွီးကိုယျတှမေို့မြှဝခွေငျးသာဖွဈပါသညျ….